Olee otú iji tọghata MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 na-MP4
MPEG nke bụ obere ụdị maka "N'ịga Foto dị ọkachamara Group" bụ ezinụlọ nke dijitalụ video mkpakọ ụkpụrụ na formats nke faịlụ nke a na-mepụtara site na otu. Ka tụnyere ndị ọzọ formats, MPEG-amị video faịlụ na-nke mma. MPEG-1 na MPEG 2 na-na-ewu ewu formats nke ìgwè ahụ.
MP4 nke a na-ezo dị ka MPEG-4 AVC bụ isi ihe afo nke MPEG-4 Part 14 anọchi Advanced Video nzuzo na bụkwa a akụkụ nke MPEG ìgwè. The MP4 nwekwara ike-atụle ka a akpa format nke na-enyere onye ọrụ nwere Nchikota video, audio, ka oyiyi ad ndepụta okwu na otu faịlụ.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị nyefee a MPEG video faịlụ ugbu na gị usoro gị iPhone ma ọ bụ onye iPod mgbe ahụ, ọ mbụ kwesịrị ka a converted MP4 usoro.
Part1: Best MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 na-MP4 Video Ntụgharị
Part2: Free MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 na-MP4 Ntụgharị
Part3: Extended ihe ọmụma n'ihi na MPEG / MPEG-1 / MEPG-2
1.1 Webata Wondershare Video Converter Ultimate
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ video Ntụgharị software si na-enyere gị iji tọghata MPEG faịlụ ka MP4 format ma ọ bụrụ na ị na-achọ onye nke kasị mma ke Atiya mgbe ahụ Wondershare Video Converter Ultimate ga-abụ ihe apt nhọrọ. A magburu onwe software bụghị nanị atọghata videos iche iche formats ma na-eme ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ dị ka edezi, nbudata, na-ere ọkụ, akada, ime, na-ekiri na ihe karịrị 150 formats na ndị ọzọ. The software dị maka Windows nakwa dị ka Mac usoro na anya mgbe niile video akakabarede oyomde. Ụfọdụ n'ime ndị isi na atụmatụ nke Wondershare Video Converter Ultimate ndị dị ka ndị:
30 oge ngwa ngwa akakabarede: Dị ka tụnyere ndị ọzọ software ke Atiya, Wondershare Video Converter Ultimate bụ ugboro 30 ngwa ngwa na ya ọsọ.
Kwado ọnụ ọgụgụ buru ibu nke formats: The software na-enye gị na nso nke ndakọrịta dị ka ọ na-akwado n'elu 150 formats na ọhụrụ na ndepụta ịbụ 4K video usoro.
Wuru Na-DLNA Nkwado: The plugin nke software atụmatụ wuru na DLNA akwado ndị niile na gbaara ngwaọrụ tinyere PS3, Xbox 360 na ndị ọzọ
Otu click Downloader: E nwere smart Download bọtịnụ na software na-enyere gị ibudata video na nanị otu click. YouTube MP3 nwekwara ike ebudatara kpọmkwem na iji software.
• Enye ohere akakabarede n'ihi na otutu ngwaọrụ: The software-enyere gị iji tọghata ọkacha mmasị gị na fim na ndị ọzọ na video ka elu àgwà faịlụ na ike na-enwe na otutu ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, Kindle Fire, Android na ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere enwe nkiri kacha amasị gị ọbụna na ọ laa.
• nyefe na-enweghị USB: The converted faịlụ na software nwere ike mfe kpọfere Android nakwa dị ka Apple ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla mkpa maka eriri USB. Ẹdude WiFi netwọk nwere ike iji na nyefee faịlụ.
1.2: otú iji ya iji tọghata MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 na-Mp4 na Nzọụkwụ na Screenshots
N'okpuru ebe nyere bụ nzọụkwụ iji tọghata MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 na-MP4 iji Wondershare Video Converter Ultimate.
Nzọụkwụ 1 Mepee software
The nnọọ nzọụkwụ mbụ bụ ibudata, wụnye na Mepee Wondershare Video Converter Ultimate software na gị usoro.
Nzọụkwụ 2 Tinye faịlụ
Ugbu a pịa na "Tinye faịlụ" nhọrọ ka ịgbakwunye faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. I nwekwara ike ịdọrọ na dobe faịlụ. (Họrọ MPEG faịlụ ugbu na gị usoro na ị chọrọ iji tọghata).
Nzọụkwụ 3 Họrọ mmepụta format:
Ugbu a na n'akụkụ aka nri nke software, a ndepụta nke mmepụta format e nyere site na nke dị mkpa ka ị họrọ chọrọ nhọrọ. (Họrọ MP4 iji tọghata gị MPEG faịlụ ka MP4 format)
Nzọụkwụ 4 tọghata faịlụ
Ozugbo mmepụta format họrọ, pịa na "tọghata" button nke ga-amalite usoro nke faịlụ akakabarede.
Mgbe ihe ịga nke ọma akakabarede, software ga-ọnọdụ banyere otu ihe ahụ.
2.1: Webata Wondershare Video Converter Free
Nke a bụ ihe magburu onwe software na-enyere gị iji tọghata gị vidiyo na ọdịyo dị iche iche formats na bụ dakọtara na kọmputa gị na ngwaọrụ ndị ọzọ. Nke a software bụghị nanị mfe iji kamakwa free. The software na-akwado site Mac nakwa dị ka Windows usoro na atụmatụ elu àgwà akakabarede tinyere ndị ọzọ edezi ọrụ dị ka n'usoro n'usoro, na-agbakwunye watermarks, trimming na ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ndị isi atụmatụ nke software na-agụnye ndị na-esonụ:
Fast akakabarede ọsọ: The software-eme ka eji nke ọhụrụ nkà na ụzụ na si otú ahụ nwere ibu ngwa-ngwa akakabarede ọsọ.
Na-akwado multiple format: The software bụ dakọtara na ọtụtụ ndị formats gụnyere MPEG, flash, AVI, MP4, 3GP, YouTube na ndị ọzọ.
High Quality: Ọ bụ ezie na software bụ free iji ma ọ dịghị imebi àgwà na akakabarede bụ nke elu àgwà na-enye oké video ahụmahụ.
Na-abịa na-edezi atụmatụ: Yana akakabarede, software na-enye ohere video edezi atụmatụ dị ka trimming, na-agbakwunye ndepụta okwu na watermarks, resetting size na ndị ọzọ ka aka gị n'ozuzu ahụmahụ.
Secure na nkwado zuru ezu: The software bụ kpamkpam nchebe na-abịa na 24/7 support.
2.2 otú iji ya iji tọghata MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 na-MP4
N'okpuru ebe nyere bụ nzọụkwụ iji tọghata MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 na-MP4 iji Wondershare Video Converter Free.
The nnọọ nzọụkwụ mbụ bụ ibudata, wụnye wee mepee a free software na gị usoro.
Ọzọ, ịgbakwunye MPEG faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. N'ihi nke a, pịa na "Tinye faịlụ" nhọrọ wee họrọ ọ faịlụ site na otu ebe. I nwekwara ike ịdọrọ na dobe faịlụ na mkpa ka a converted. Ogbe akakabarede pụkwara mere iji tọghata multiple faịlụ na oge.
Ugbu a na n'akụkụ aka nri nke software, a ndepụta nke mmepụta format e nyere site na nke mkpa ka ị họrọ nhọrọ nke MP4 (iji tọghata na MP4 format)
Nzọụkwụ 4 tọghata
Ọzọ mkpa ka ị pịa na "tọghata" nke ga-amalite usoro nke akakabarede.
Ozugbo akakabarede usoro dị n'elu, software ga-egosi na ọnọdụ.
Gịnị bụ ihe dị iche na n'etiti MPEG, MPEG-1, MPEG-2?
MPEG: N'ịga Foto dị ọkachamara Group (MPEG) bụ ìgwè ndị ọkachamara na kpụrụ IEC na ISO ka ịtọ ọdịyo na video mkpakọ na nnyefe ụkpụrụ. Ọzọkwa akpọ ka m-mkpọ, MPEG nwekwara ike kpọrọ dị ka ezinụlọ dijitalụ video mkpakọ ụkpụrụ nakwa dị ka faịlụ formats site ìgwè. Ka tụnyere ndị ọzọ sọọ mpi formats dị ka QuickTime, Indeo na ndị ọzọ, MPEG-emepụta mma videos. The algọridim nke MPEG mpikota onu data ka na-etolite ya na obere ibe n'ibe nke ike-ebute site ná mfe na ike-ahụ ga-decompressed. The isi ụkpụrụ nke MPEG-agụnye MPEG-1, MPEG2, MPEG-3 na MPEG-4.
MPEG-1: Nke a ọkọlọtọ nke MPEG-enye video mkpebi nke 352 site 240 na 30fps na a ọkọlọtọ bụ maka lossy mkpakọ nke audios na vidiyo. MPEG-1 e mere iji mpikota onu raw dijitalụ videos nke VHS-àgwà na CD ọdịyo na 1.5Mbit enweghị ihe ọ bụla ọnwụ nke oké mma. The format na-arụpụta ihe videos na nwere àgwà nke bụ ubé n'okpuru ot VCR videos. The format mere ka dijitalụ audio Broadcasting kwere omume.
MPEG-2: The MPEG-2 na-tumadi eji dị ka usoro nke dijitalụ TV n'ókè nke na-ohuru site USB, terrestrial na kpọmkwem na agbasa ozi n'ikuku satellite TV. Nke a format bụ zuru ezu maka niile isi ụkpụrụ nke TV gụnyere HDTV na NTSC. The format a na-eji ezipụta na fim na ndị ọzọ na omume formats nke na-ekesa na DVD na ndị ọzọ na discs. N'ihi ya TV receivers, TV ụgbọ, DVD Player na ngwaọrụ ndị ọzọ na-e dị ka kwa MPEG-2 ọkọlọtọ.
N'ihi ya, ọ ga-kwubiri na MPEG-2 bụ nọchiri ma ọ bụ MPEG-1 format na nwere mma. MPEG-1 bụ ihu ọma na-eji maka VCD ebe MPEG-2 ọkọlọtọ na-eji maka DVD. Na okwu nke ngbanwe algọridim ezie na MPEG-2 bụ ihe mgbagwoju ma ọ na-eji elu na variable bitrates na-atụmatụ elu mkpebi.
MP4 Download: ebe na otú ka Download?
Olee otú iji tọghata MP4 ka M4V na Zero Ogo Loss
AVCHD vs MP4, nke dị mma
> Resource> MP4> Olee otú iji tọghata MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 na-MP4